TinyCal - म्याक को लागी गुगल र एप्पल क्यालेन्डर बेर आश्चर्यजनक
TinyCal - म्याकको लागि गुगल र एप्पल क्यालेन्डर
नवीनतम:3/ 11 / 20
आवाश्यक हुन्छ: म्याक 10.5-12.0+
TinyCal - म्याक मेनूबारमा Google र एप्पल क्यालेन्डर।
गुगल वा एप्पल क्यालेन्डरको सजिलो पहुँच र दृश्य, सिधा मेनूबारबाट। घटनाहरू, रिमाइन्डरहरू, धेरै विकल्पहरू थप्नुहोस्। यसले धेरै महिना देखाउन सक्छ, कस्टम क्यालेन्डरहरू प्रयोग गर्न सक्छ, धेरै देशहरूबाट छुट्टीहरू देखाउँदछ र बहु ​​व्यक्तिगत / व्यापार क्यालेन्डरहरू। धेरै उपयोगी!
TinyCal - म्याक मात्रा को लागी गुगल र एप्पल क्यालेन्डर
गुगल वा एप्पल क्यालेन्डरको सजिलो पहुँच र दृश्य, सिधा मेनूबारबाट। घटनाहरू, रिमाइन्डरहरू, धेरै विकल्पहरू थप्नुहोस्। यसले धेरै महिना देखाउन सक्छ, कस्टम क्यालेन्डरहरू प्रयोग गर्न सक्छ, धेरै देशहरूबाट छुट्टीहरू देखाउँदछ र बहु ​​व्यक्तिगत / व्यापार क्यालेन्डरहरू।
टिनीकलमा धेरै उपयोगी सुविधाहरू छन्।
एप्पल क्यालेन्डरले तत्काल मिनी क्यालेन्डर अवलोकन गर्दछ र म्याक मेनूबारबाट पहुँच
गुगल क्यालेन्डर तत्काल मिनी पात्रो हेर्नुहोस् र म्याक मेनूबारबाट पहुँच
गुगल क्यालेन्डर ग्याजेटहरूका लागि समर्थन
विन्यास महिना प्रदर्शन
कन्फिगुरेसन कार्यक्रम प्रदर्शन
फाँसी टाढा मेनू
घटनाहरू सिर्जना र मेटाउनुहोस्
आईएसओ 8601०१ हप्ता संख्याहरू
माध्यमिक क्यालेन्डर ओभरले
टिनीकललाई म्याक ओएस एक्स १०.० वा पछिल्लो आवश्यक पर्दछ। गुगल क्यालेन्डर एकीकरण गुगलद्वारा प्रदान गरिएको हो।
बहु महिना देखाउँदै
TinyCal एक समय मा १, २, or वा १२ महिना देखाउन अनुकूलित गर्न सकिन्छ। प्रदर्शन अग्लो वा चौडा रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
टिनीकलले अष्ट्रेलियादेखि भियतनामसम्म 40० बिभिन्न देशहरूको बिदाका लागि सार्वजनिक गुगल क्यालेन्डरहरू प्रदर्शन गर्न सक्दछ। यसले तपाईंको व्यक्तिगत गुगल क्यालेन्डरबाट घटनाहरू प्रदर्शन गर्न सक्दछ। निम्न स्क्रिनशटले अमेरिकाबाट छुट्टिहरू नीलो र रातोमा निजी पात्रो देखाउँदछ।
टिनीकल अन्य क्यालेन्डरहरू, जस्तै बौद्ध, हिब्रू, इस्लामिक, र जापानीज देखाउन अनुकूलित गर्न सकिन्छ। निम्न स्क्रिनशट यहूदी बिदाको साथ हिब्रू पात्रो देखाउँदछ।
TinyCal विन्डो एक आँसू-टाढा मेनू हो जुन स्क्रिनको कुनै पनि ठाउँमा रिपोजिट गर्न सकिन्छ।
टिनीकल विन्डोमा, आजको मिति गोलाकार छ। थप रूपमा, यदि आज केहि घटनाहरू छन् भने तिनीहरू मेनूबार आइकनमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। निम्न स्क्रिनशटमा, तल्लो दायाँमा निलो त्रिकोणले संकेत गर्दछ कि आज घटना छ।
आधारभूत नियन्त्रणहरू तलको स्क्रिनशटमा चित्रित छन्।
- एप्पल क्यालेन्डर केहि प्रयोगकर्ताहरूको लागि देखाउँदैन। स्थिर
- कडाई गरिएको रनटाइम सक्षम गरियो
- म्यानुअल फिक्स
- अँध्यारो मोडमा टिनीकल क्यालेन्डरमा महिनाको प्रदर्शन फिक्स गर्दछ।
- गुगल र एप्पल क्यालेन्डरहरू पहुँच गर्नका लागि अनुमतिहरू सुधार गरियो
- पात्रो को आकार मा ठूलो आकार मा डेटा को प्रदर्शित देखाउँदै
- Mojave Mac OS 10.14 मा पूर्ण रूपमा काम गर्दछ
- अँध्यारो मोडमा फिक्स गर्दछ
- विविध सन्तुष्टिको नयाँ सुरक्षाको लागि परिवर्तन गर्दछ
- कम्पाईल मुद्दा फिक्स गरियो
- अपडेट कामका लागि जाँच गर्नको लागि सानो चिमटा र जाँचको अन्तराल सेट गर्न सक्षम हुन, दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक।
- अपडेटका लागि जाँच गर्नुहोस् (स्पार्कल) अब काम गर्दछ। तपाई अन्तराल पनि सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यो पहिलो पटक तपाईलाई म्यानुअली डाउनलोड गर्न आवश्यक पर्दछ।
- ui परिवर्तनहरू।
- बग फिक्सहरू
- एप्पल क्यालेन्डर छनौटमा क्र्यास फिक्स गरियो।
- अब एप्पल क्यालेन्डर समर्थन गर्दछ! प्रेफ्समा या त एप्पल वा गुगल क्यालेन्डर छान्नुहोस्।
- Google पात्रोका लागि थप पात्रोहरू थपियो। यसमा राष्ट्रिय, धार्मिक, खेलकुद र विविध क्यालेन्डरहरू सामेल छन्। धेरै सजिलो
- धेरै धेरै साना परिवर्तन र सुधारहरू।
तपाईका सुझाव र बग फिक्सहरूका लागि सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद! यसले अनुप्रयोगको विकासलाई मद्दत गर्दछ।
- गुगल क्यालेन्डर लग इनमा सुधार
- रेटिना डिस्प्लेको साथ आइकन मुद्दा फिक्स गरियो
- बक्स संवाद लि about्कको बारेमा निश्चित
- प्रिफ्स अब कुनै पनि ठाँउमा खोलिन्छ यदि प्रिफेस अर्को स्पेसमा पहिल्यै खोलिएको छ भने
- अधिक ui परिवर्तनहरू हिजो यी परिवर्तनहरू बाहेक
- अब कम्पाइल गरिएको छ र गुगलको नयाँ एपीआई प्रयोग गर्दै
- भर्खरको xcode साथ संकलित।
- केहि यूआई सुधारहरू
- घटना लूप स्थिर बनाउनुहोस्।
- अन्य बगहरू
- संस्करणहरू अब सेयरवेयरको लागि (बेर आश्चर्यजनक स्टोरमा) र एप्पल स्टोर (जब तिनीहरू समीक्षा समाप्त हुन्छन्) को लागि संस्करणहरू।